Fanambaràna (finoana) - Wikipedia
Ny fanambaràna dia fahalalana azo mivantana amin' Andriamanitra ka mety ho amin' ny alalan'ny fisehoan' Andriamanitra izany na ny fahenoana ny teny mivoaka avy ao aminy na ny tsindrimandry azon'ny mpaminany na ny fanomezany lahateny efa voasoratra rahateo avy any aminy na fisehoan-javatra tsy fahita eo amin' ny zavaboary. Atao hoe fivavahana vokatry ny fanambaràn' Andriamanitra ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo nefa tsy ireo fivavanana telo ireo ihany no mahalala ny atao hoe "fanambaràna".
I Mosesy sy ilay Roimemy nirehitra, nataon'i Domenico Fetti, taona 1613-1617
Misy ny atao hoe fanambaràna ankapobeny, izay fahalalana an' Andriamanitra ampitain' ny zavaboary, izay fahita matetika amin'ny fivavahana tatsinanana izany. Misy koa ny fanambaràna manokana, izay fahafantarana an' Andriamanitra amin' ny alanan' ny fahitana sy ny nofy ary ny zava-mitranga amin' ny olona tsirairay na amin' ny tantara.
Mety miaraka amin' ny fanambaràna momba ny fiafaran' izao rehetra izao izany na ahitana fananarana ara-pitondran-tena koa ka mitana ny olona hiova finoana noho ny fahantomotry ny farany izay ambaran' ny fanambaràna, ary mamporisika azy hitondra tena raka izany.
Fomban'ny fanambaràna ny sady manafina ny zavatra asehony, ka mitarika izay olona nanakainky azy hanatona ny fivavahana nampita izany fanambaràna izany, ka mampihemotra hatrany ny fotoana hahafantarana manontolo ny tontolon' Andriamanitra.
1 Ny fanambaràna
1.1 Ny fanambaràna, amin' ny jodaisma
1.2 Ny fanambaràna, amin' ny kristianisma
1.3 Ny fanambaràna, amin' ny finoana silamo
2 Fanambaràna mitohy sy fanambaràna miandalana
2.1 Fanambaràna mitohy
2.1.1 Ao amin' ny fiangonana kristiana sasany
2.1.2 Ao amin' ny fivavahana hafa
2.2 Fanambaràna miandalana
2.2.1 Ao amin' ny bahaisma
Ny fanambaràna, amin' ny jodaismaHanova
Ao amin' ny jodaisma, araka ny Bokin' ny Eksaody (na Eksodosy) ao amin' ny Baiboly, dia fanambaràna ny fahitan' i Môizy (na Mosesy) ny roimemy mirehitra nefa tsy levona, sy ny nandrenesany ny feon' Andriamanitra avy tao amin' izany afo izany. Fanambaràna koa ny fivoahan' ny Zanak' i Israely avy tany Egipta. Zava-dehibe eo amin' ny finoan' ny Jiosy ny fanambaràna nataon' ny mpaminany.
Ny fanambaràna, amin' ny kristianismaHanova
Ny fahitan'i Joany tao Patmosy
Mino ny fisian' ny fanambaràna ankapobeny ny Kristiana sady mino koa ny fanambaràna manokana. Ny fanambaràna ny fitiavan' Andriamanitra ny olona sy ny fanambaràna ny famonjena azy ireo dia tonga nofo ao amin' i tenan' i Jesoa Kristy, araka ny ambaran' ny Testamenta Taloha izay hazavaina amin' ny alalan' ny Testamenta Vaovao (sy ny Lovam-pampianarana ary ny fahefam-piangonana, ao amin' ny katôlisisma sy ny kristianisma ôrtôdôksa).
Izany fanambaràna izany dia ampahatsiahivina mandritra ny fanompoam-pivavanana manaraka litorjia, ary ho tonga amin' ny fara tampony amin' ny fiverenan' i Jesoa indray izay fisehoan' Andriamanitra tsy misy takona, atao hoe parosia.
Ny fanambaràna, amin' ny finoana silamoHanova
Ny Mpaminany Mohamady mandray ny Kor'any avy amin'ny anjely Gabriela. Notsoahana tao amin'ny Jami' al-Tawarikh (Tantaran' izao tontolo izao) nataon'i Rashid al-Din, Tabriz, Persia, taona 1307.
Ny fanambaràn' Andriamanitra dia mitana anjara toerana lehibe eo amin' ny finoana silamo. Ny filaminana misy eo amin' ny zavaboary dia fanambaràna ankapobeny koa amin' ny Miozolmana, na dia anteriny ny fanambaràna manokana azon' ny olona sasany manam-pifandraisana akaiky kokoa amin' Andriamanitra.
Amin' ny mpino silamo dia fanambaràna ny nadrenesan' i Mohamady feon-dakolosy niova ho teny. Milaza ny Kor'any fa nambaran' Andriamanitra tenany ny voanteny tsirairay sy ny litera tsirairay ao aminy. Mino ny Miozolmana fa nambarany amin' i Mohamady ny hafatra farany ho an' ny olombelona tamin' ny alalan' ny anjely Jibrily (na Gabriela). Mpaminany farany i Mohamady ka ny fanambaràna azony dia nomena azy amin' ny endrika boky masina, dia ny Kor'any. Ny Kor'any no fanambaràna tongalafatra ny amin' Andriamanitra amin' ny olombelona, izay tsy diso mandra-pahatongavan' ny andron' ny fitsanganan-ko velona izay atao hoe andron' ny fitsarana farany koa.
Fanambaràna mitohy sy fanambaràna miandalanaHanova
Ao amin' ny fiangonana kristiana sasanyHanova
Ny fanambaràna mitohy dia fanambaràn-tenan' Andriamanitra amin' ny olombelona izay tsy nitsahatra tamin' ny fotoana lasa fa mitohy mandraka ankehitriny. Ao amin' ny kristianisma dia hita indrindra izany ao amin' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany, ao amin' ny Fiangonan' ny Sakaiza (Quakers) ary ny pentekotisma sy kristianisma karismatika, na dia hita koa aza izany amin' ny antokom-pinoana hafa.
Ao amin' ny fivavahana hafaHanova
Ny fanambaràna mitohy koa dia endriky ny fombam-pivavahana ao amin' ny taoisma.
Ao amin' ny bahaismaHanova
Ny fanambaràna miandalana dia foto-pampianarana lehibe ao amin' ny finoana bahay, izay milaza fa ny fahamarinana ara-pivavahana dia ambaran' Andriamanitra miandalana sy amin' ny vanimpotoana tsirairay amin' ny alalan' ny hafatra mifandimby avy aminy, ary ny fomba fampitana azy araka ny foto-pampianarana samihafa dia mifanentana amin' ny fivoarana ara-potoana sy ara-kolontsaina. Noho izany dia eken' ny Bahay ny maha avy amin' Andriamanitra ny fivavahana maro manerana izao tontolo izao, ary heverin' izy ireo fa dingana miavaka tsirairay eo amin' ny tantaran' ny fivavahana tokana ireo fivavahana toa samihafa ireo. Milaza ny mpino bahay fa ny fanambaràna azon' i Bahá'u'lláh no vaovao indrindra sy manan-danja indrindra eo amin' ny fiarahamonina ankehitriny. Izany fiheverana izany dia mifamatotra amin' ny maha tokana ny finoana bahay sy amin' ny fomban' ireo mpaminany izay antsoin' izy ireo hoe "Fisehoan' Andriamanitra". Izany koa dia mifamatotra amin' ny fomba fijery bahay momba ny tanjona sy ny toetran' ny fivavahana, ny lalàna, ny zavatra inoana, ny kolontsaina ary ny tantara. Noho izany dia heveriny ho sady miandalana ny no mitohy ny fanambaràna avy amin' Andriamanitra ka tsy misy fiafarany.
Tsindrimandry na Teôpneostia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanambaràna_(finoana)&oldid=1044426"
Dernière modification le 31 Martsa 2022, à 10:37
Voaova farany tamin'ny 31 Martsa 2022 amin'ny 10:37 ity pejy ity.